सीतालाई उपचार सहयोग - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home खेल सीतालाई उपचार सहयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले ब्याडमिन्टन खेलाडी सीता राईलाई उपचारका लागि आइतबार आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । सीतालाई राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक उपलब्ध गराइएको हो ।
कोषका सदस्य–सचिवसमेत रहेका नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले सीता उपचाररत अस्पाताल ट्रमा सेन्टरमा गई सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे । यसअघि नेपाल ब्याडमिन्टन संघले उनको उपचारको सहयोगको लागि शुक्रबार ५० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका थिए । सीतालाई आइतबार डिस्चार्ज गरिएको छ । ट्रमा सेन्टरमा डाक्टर सरोज राईसहितको टोलीले गत बिहीबार उनको घुँडाको सफल शल्यक्रिया गरेको थियो । ८ असोजमा प्रशिक्षण दौरान लडेर उनको घुँडामा चोट लागेको थियो ।
चोट लागेको तीन सातापछि शल्यक्रिया भएको हो । घुँडाको एसिएल टियर भएको थियो । गत वर्ष स्वदेशमा आयोजना भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलुकद (साग) सीता सम्मिलित टोलीले टिम इभेन्ट्समा कांस्य पदक जितेको थियो । यसअघि असोज तेस्रो तथा राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले चार खेलाडीलाई उपचारका लागि रकम हस्तान्तरण गरेको थियो । कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको रकमको व्याजबाट समस्यामा परेका खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
भर्खरै एजेन्सी - November 25, 2020 0
दीपशंकर चौलागाई - February 20, 2020 0
ओपेन्द्र बस्नेत - August 27, 2020 0
पहिलो पटक डेटिङ जाँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्
एजेन्सी । पछिल्लो समय डेटिङ सामान्य प्रचलन जस्तो हुन थालेको छ । कुनै कार्यक्रममा भेट भयो वा सामाजिक सञ्जालमा भेट भयो र मन प-यो...
समाज भवनाथ प्याकुरेल - April 20, 2020 0
काठमाडौं । महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित निःशुल्क आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । लकडाउन अवधिमा हृदयघात, मिर्गौला रोगीलगायतका बिरामीलाई अस्पतालसम्म...
Breaking News सुदीप कोइराला - June 24, 2020 0
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - March 17, 2020 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - November 11, 2020 0
अर्थ राजधानी समाचारदाता - November 26, 2020 0